ZANDARIMARIAM-PIRENENA : Mitohy hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fanatsarana ny fomba fiasa
Ny 9 avrily 2019 lasa teo, nanatanteraka fitsidiham-piaraha-miasa tao amin’ny biraon’ny Jeneraly Richard Ravalomanana... 10 avril 2019
Sekreteram-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny fiarovam-pirenena miadidy ny zandarimaria tetsy Betongolo i Ramatoa Marie Dimond solontena maharitry ny Pnud miasa sy monina eto Madagasikara sy Andriamatoa Daniel Silva Y Poveda, Lehiben’ny iraka avy ao amin’ny Vondrona iraisam-pirenena momba ny fifindra-monina (OIM). Ny dinika dia niompana tamin’ny tomban’asa vita avy amin’ny tetik’asa ARSSAM (Appui à la réforme du secteur de la sécurité à Madagascar) sy ny tetik’asa RAES (Rétablissement de l’autorité de l ’État dans le Sud) izay ho tapitra amin’ny desambra 2019 ary ny mety ho fitohizany.
Manaraka izany, noresahana ihany koa ny momba ny fitovian-jon’ny lehilahy sy ny vehivavy ato anatin’ny zandarimariam-pirenena. Ankoatra ny fampitaovana « Motos », « drones » sy « émetteurs-récepteurs » efa nomen’ny SNU (Système des Nations unies) tany Betroka moa dia hotokanana tsy ho ela ihany koa ireo « Postes avancés » an’ ny Zandarimaria namboarina tamin’ny alalan’ireo tetikasa ireo. Naneho ny fahavononana hatrany ireo vahiny hanampy sy hanome tan-tsoroka ny mpitandro filaminana. Ny Jeneraly SEG kosa dia nanome toky fa hampiasaina amin’ny tokony ho izy ireo fitaovana azo ary vonona hatrany ny zandary hanome hatramin’ny ainy hiarovana ny andrim-panjakana, ny olona sy ny fananany.